Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Princess Cruises Emerald Ship ibuyela kwiLwandle oluPhakamileyo
I-Emerald Princess icwangciselwe ukuba ifike e-Ft. ILauderdale nge-30 ka-Okthobha ka-2021, kwaye baya kuhamba ngolwandle uthotho lweentsuku ezili-10 zePanama Canal cruise, ujikeleze usuka eFt. ILauderdale ngoDisemba 2021.
IPrincess Cruises namhlanje iphawule ukubuyela kwinkonzo yenqanawa yesithathu e-US-Emerald Princess-isuka kwizibuko laseLos Angeles kuhambo lweentsuku ezili-15 lwePanama Canal oluya eFt. ILauderdale. Iindwendwe zokuqala ze-Emerald Princess zamkelwa ebhodini ngabasebenzi ngomsitho okhethekileyo wokusika iribhoni.
"Inkosazana ibiyinxalenye yeenkumbulo ezininzi ezikhethekileyo kuthi," utshilo uChris noKathleen Lennon weSikhumbuzo, CO, iindwendwe zokuqala ze-Emerald Princess ukukhwela inqanawa yokuhamba ngenqanawa. Olu lolu hambo lwethu lwesi-20 kunye nesihlandlo sethu sesithathu sikhwela i-Emerald Princess, kwaye uchulumanco esasinalo xa sasifika namhlanje lwalungummangaliso. Ndiziva ndifuna ukubuyela ekhaya. ”
I-Emerald Princess ibonelela ngekhefu leMedallionClass, ehambisa okokugqibela ngaphandle kokuzikhandla, uhambo lomntu. IMedallion sisixhobo esikumgangatho wekota, esinxitywayo esenza yonke into ukusuka kwindawo yokukhwela ngaphandle kokuchukumisa ukuya ekufumaneni abathandekayo naphina enqanaweni, kunye nenkonzo ephuculweyo njengayo nayiphi na into efunekayo kwiindwendwe, zisiwe ngqo kubo, naphi na apho bakho enqanaweni. Yaziwa njengeyona nto iphambili ekunxityweni kushishino lweendwendwe lwehlabathi.
Ukuhamba ngesikhephe ngePrincess Cruise kwi-Emerald Princess kuyafumaneka kwiindwendwe ezifumene idosi yokugqibela yeyeza lokugonya le-COVID-19 ubuncinci kwiintsuku ezili-14 ngaphambi kokuqala kolwandle kwaye banobungqina bokugonywa. Zonke iindwendwe ezigonywe ngokupheleleyo kufuneka zivelise uvavanyo lwe-COVID-19 olungelulo olonyango, olubonwa ngonyango (i-PCR okanye i-antigen) oluthathwe kwisithuba seentsuku ezimbini zokuqalisa kwabo konke ukuhamba ngomkhumbi kweNkosazana. Ukugonywa kwabasebenzi kungqinelana nezikhokelo zeCDC.